AMP WordPress Plugin - nyore AMP - SN
offline_bolt Gadzira AMP mapeji
AMP WordPress Plugin - Isa & Shandisa
Izvi vakasununguka BSN WordPress plugin nokuda WordPress Blogs, nhau nzvimbo uye nyaya Postings, zvaanopa simba Google-AMP musi WordPress nzvimbo, pamwe the clicks mashomanana!
Iye zvino gadzirisa yako WordPress webhusaiti kune nhare mbozha ne "nyore AMP" uye simudzira yako webhusaiti yeiyo Mobile Yekutanga Index . Iine Google-AMP plugin yeWordPress, ako WordPress zvinyorwa zvinowana iyo AMPHTML vhezheni, iyo (Google inoda) inochengetwa muGoogle AMP cache nekufamba kwenguva uye nekudaro, kuwedzera kune inokurumidza AMPHTML kodhi, zvakare nekukurumidza zvakanyanya kurodha nguva pane nhare zvishandiso Zvishandiso.
Edza izvi kunze, yakapusa WP AMP plugin : Isa. Activate. Yapera!
Isa iyo WordPress AMP plugin
Pane nzira mbiri dzekuisa iyo WordPress AMP plugin - saka sarudza imwe yeanotevera akasiyana uye ita nhanho dzakanyorwa ipapo kuisa plugin uye nekudaro otomatiki kugadzirwa kwe "Accelerated Mobile Mapeji" (AMP) kune ako Activate mawebhusaiti:
Isa iyo WordPress AMP plugin - (otomatiki)
Isa WordPress AMP:
Pinda kune yako WordPress saiti.
Chinja kune "Mapulagi" -> "Isa" mumenyu
Tsvaga "amp-cloud.de" uye isa AMP plug-in "nyore AMP"
Shandisa WordPress AMP:
Chinja kune "Mapulagi" -> "Akaiswa Mapulagi" mune menyu
Enda kune "nyore AMP" mune runyorwa rweWordPress plugins
Dzvanya iyo "Activate" link.
Isa iyo WordPress AMP plugin - (nemaoko)
WP AMP plug-in "nyore AMP" - kurodha pasi:
Dhawunirodha yazvino plug-in vhezheni seZIP faira kuburikidza neinotevera yekurodha link.
"nyore AMP - yazvino vhezheni"
Mushure mekurodha pasi AMP plug-in, unzip iyo Zip faira.
Sevha WP AMP plugin muWordPress:
Chengeta iyo isina kuvharwa "dhairekitori" mune dhairekitori reWordPress pasi pe:
... / wp-zvemukati / plugins /
... / wp-zvemukati / plugins / wp-amp-it-up / ...
Pinda muiyo WordPress blog
Bvunzo WordPress AMP saiti
Mushure mekubudirira kuisirwa AMP nekumisikidza muWordPress, unogona kuongorora ako AMP mapeji.
Ndokumbira utarise kuti kudaidza iyo AMP peji kekutanga kunogona kutora nguva yakati rebei kupfuura yagara! - Kana uchirodha kekutanga kana kana uchigadzirisa, iyo plugin inoshandura iyo HTML kodhi kuita AMPHTML kodhi, iyo pakutanga inotora yakawanda kana shoma nguva, zvinoenderana nehuwandu hwezviri mukati. - Iyo yekupedzisira, chaizvo inokurumidza kurodha nguva haisi kunyanya kukonzerwa neAMP peji rekutarisa, asi panzvimbo yekuratidzwa kwekupedzisira kweiyo Google AMP peji kubva kune yekutsvaga injini AMP cache, i.e. kuburikidza neinjini yekutsvaga inokasira maseva - i.e. Peji yekutarisa haisi iyo yakafanana neiyo yapashure yakananga kubva kunjini yekutsvaga!
Kuti uwane kuratidzwa peji rako re AMP , wedzera paramende "amp = 1" mubrowser kero bar pamagumo eiyo URL yechinyorwa / kutumira.
? amp = 1 - Kana pasina tambo yemubvunzo inoshandiswa:
& amp = 1 - kana tambo yemubvunzo ikashandiswa:
Nei iyo WordPress AMP plugin?
"nyore AMP" ndiyo yepamutemo Google AMP plugin yeWordPress kubva amp-cloud.de uye inogadzira zvoga zvoga uye zvemahara Google-inoenderana Yekukurumidza Mahara Mapeji (AMP) kune ako WordPress zvinyorwa!
Gadzira AMP peji Dziviriro yedata & mashandisiro ekuki chinyorwa